Kick-boxing : nitosatosaka ny valin-kasasarana azon’i Sévérin | NewsMada
Kick-boxing : nitosatosaka ny valin-kasasarana azon’i Sévérin
Nalaza vetivety tampoka teo i Madagasikara tamin’ny nahazoan’i Mamonjisoa Sévérin ny tompondaka eran-tany teo amin’ny kick-boxing pro. Nitobaka kosa ny valin-kasasarana azon’ity maherifo ity.
Mamonjisoa Sévérin. Mpikatroka kick-boxing malagasy eo amin’ny sokajy -60 kg, avy amin’ny klioba Cosrm 5, Toliara. Nandrombaka ny tompondakan’i Madagasikara inenina nisesy (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). Tompondakan’i Afrika ihany koa ny taona 2014. Nandrombaka ny tompondaka eran-tany na « Championnat du monde pro » farany teo, ny 27 desambra 2015.
Noho io vokatra vao mafana be io, niraradraraka ny valin-kasasarana azon’ity mpikatroka avy amin’ny Cosrm Toliara ity. Ankoatra ilay lelavola 5 tapitrisa Ar avy amin’ny filoham-pirenena, nahazo fisondrotana grady amin’ny maha miaramila azy i Mamonjisoa Sévérin. Fanomezana avy amin’ny fanjakana amin’ny alalan’ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahan-tena izany. Tsy vitan’izay fa mbola niampy lelavola 2 tapitrisa Ar koa avy amin’ny minisitra mpiahy azy. Ankoatra izay, mbola notoloran’ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany lelavola 2 tapitrisa Ar ihany koa i Sévérin. Tsiahivina fa nahazo 2.000 euros, manodidina ny 6.800.000 Ar eo ho eo, avy amin’ny federasiona iraisam-pirenena miahy ireo mpikatroka matihanina (ISKA), ihany koa ny tenany. Etsy andaniny, nampanantena kosa ny minisitry ny Fiarovam-pirenena fa tsy hajanona any Toliara ao amin’ny tobi-miaramila RM5 i Sévérin fa hoezahana ny hampiakarina azy eto an-dRenivohitra ahafahany manomantena hatrany eo amin’ny tontolon’ny kick-boxing.
Milaza ny hanolotra fanampiana an’ity mpikatroka ity ihany koa ny eo anivon’ny Komity olympika malagasy (Com).
Ankoatra izay, raha ny zava-bitan’i Mamonjisoa Sévérin, nitondra avo ny voninahi-pirenena sy nitondra ny lazan’i Madagasikara manerana izao tontolo izao anefa, azo lazaina fa kely ny valin-kasasarana azon’ity maherifon’ny Malagasy eo amin’ny kick-boxing ity raha mitaha amin’ny azon’ireo atleta vahiny maro nitondra avo ny voninahi-pireneny. Amin’ny maha tompondaka eran-tany 2015 an’i Sévérin, tsy mendrika azy ireo fanampiana na/sy valin-kasasarana azony ireo, hatreto. Eny, fa na ny fitondram-panjakana aza, tokony hijery manokana ity olomangan’ny firenena ity, indrindra eo amin’ny lafiny maha olona.